Maxaa loo diidan yahay in Muqdisho ay Xasiloonaato
Faysal Ali Axmed (Alteeso) - April 23, 2019
The Current Political Situation of Somalia
Faysal Ali Axmed (Alteeso) - April 15, 2019
Faysal Ali Axmed (Alteeso) - May 21, 2019
​The specter of the Black Hawk Down trauma for the United States in Somalia appears to be materializing again. Blame for the recent collapse...
MW Farmajo Beenta iyo Iska-hadaaqa waxaa u dheer Inkiridda Taariikhda Ummadda. Akhriso
Axmed Geelle - June 25, 2019
Waxaan dhageystay khudbad uu Jeediyey MW Farmajo oo la hadlayey dhallinyaro ka qalin jebisay Jamacadda Ummadda oo muudo dheer burbursaneyd, hasa yeshee mahadi haka...
New strategy to sub-colonize Somalia “The alliance of Ethiopia with GULF Arabs represented by...
INTRODUCTION: On 16 June MR. Abiy Ahmed PM of Ethiopia went to visit Mogadishu as part of his new political offensive to save his country...
Farmaajo & Kheire’s reckless decision to join COMESA & AFCTA
Faysal Ali Axmed (Alteeso) - December 30, 2018
Majority of Somalis know the conundrum and the cost of more than three Million US Dollars to reverse 2009 Memorandum of Understanding “MEMO” between...
Hogaan iyo Horumar Q 1aad Waa maxay Hogaamin?
Faysal Ali Axmed (Alteeso) - May 22, 2019
Waxaan salamayaa SHacab waynaha waxanan ku salamaya salaanta islaamka ASC waxanan idin leyahay Akhris wanaagsan. Hogaamin waa nidaam Horumar ku saleesan iyo waxqabad bulsho iyo...
Editorial “President of Somalia: Mohamed Farmaajo – A dictator in the making”
Faysal Ali Axmed (Alteeso) - November 20, 2018
“Worshipping a dictator is such a pain in the ass” complains IkemOsadi, the Editor of National Gazzette in Chinua Achebe’s novel, Anthills of the...
Corruption is the curse on Somalia. Vote buying elections will only harm more
Faysal Ali Axmed (Alteeso) - November 23, 2018
“There is nothing that is a more certain sign of insanity than to do the same thing over and over again and expecting the...
Faysal Ali Axmed (Alteeso) - November 29, 2018
Warbixinta Guddiga Miisaaniyadda, Maaliyadda, Qorshaha, iyo La Xisaabtanka Hay’adaha Dowladda (GMMQXHD) ee Barlamaanka Federaalka Soomaaliya (BFS) iyo dooda la hor istaagay waxay shaaca ka...
Yaa ka dambeeya siyaasadda burburinta Baarlamaanka, Mucaaradka iyo Maamul Goboleedyada Somalia?
Faysal Ali Axmed (Alteeso) - December 25, 2018
Waxaa la wada ogsoonyahay in xiligii Madaxweyne Moxamed Cabdullaahi Farmaajo ku jiray tartanka doorashada madaxweynenimada dalka uu si cad u weerarijiray una cambaaraynjiray Itoobiya...
Faysal Ali Axmed (Alteeso) - November 18, 2018
Somalia is mired in out of control political and security situation created by broken electoral promises, egregious abuses, and foreign policy blunders committed by...